I-Eco-bungalow yengxangxasi - iSão Bartolomeu - I-Airbnb
I-Eco-bungalow yengxangxasi - iSão Bartolomeu
Indlu eyenziwe ngomhlaba sinombuki zindwendwe onguPrema
I-Eco-bungalow yengxangxasi ikwindawo entle ekhusela indalo phezu kwentaba. Phakathi kweSão Bartolomeu (2.5km) kunye neOuro Preto (20km) kwindlela emdaka, ikummandla weAtlantic Forest, entle kakhulu kwindalo. Kukho iihektare eziyi-8, imithi yeziqhamo eyi-1500 kunye nengxangxasi entle eyi-70M (ulala kumculo wamanzi). Igadi ephilayo, inja enobubele, iinkukhu neentaka ezininzi. Abantu abacalulayo, abantu abenza isini, abantu abaziingcali kunye nabantu abacalulayo abavumelekanga.
Indlu ekhusela indalo yinxalenye yeprojekthi yokukhusela indalo "Eco-centro da cachoeira". Indlu enevaranda ilula, imnandi ibe inazo zonke izinto. Inegumbi lokulala elikhulu, elinendawo elala abantu ababini nebhedi enye, iTV, nendawo yokugcina isutikheyisi enendawo yokuxhoma impahla; igumbi lokuhlambela elincinci nendawo enkulu enekhitshi, itafile nendawo yokuhlamba iimpahla. Indlu enevaranda ezimeleyo kwaye ikufutshane nendlu enkulu, apho uSandro, omnye wabaququzeleli beeprojekthi, uhlala khona. Le ndawo ikwayindawo ekhusela indalo iphinde iqeshwe yi-airbnb (indlu kunye nendlu enevaranda ziqeshiswa kunye kuphela kwiqela elifanayo).
Siyakuthanda ukucoceka, iindwendwe ziza kusoloko zifumana indawo ecocekileyo. Asinikezeli ngokutya okanye ibhedi nezinto zebhedi (yimiqamelo kuphela neengubo ekugqibeleni). Ingxangxasi iyi-70M ukusuka kwindlu enevaranda, kunye nehla malunga ne-30M kwaye, ezantsi, enye indawo encinci enechibi elihle. Kule ngingqi, kukho iingxangxasi ezininzi ezikufutshane, ezifana neMonaco Doido (4km) kunye neSão Bartolomeu (6km). Umhlaba uselunxwemeni lweRio das Velhas ucoceke ngokupheleleyo kwaye uneendawo eziliqela zokuhlamba.
SiseMaphandleni, kumgama oziikhilomitha ezingama-20 ukusuka e-Ouro Preto kwindlela yomhlaba (i-Estrada Real). 2km kude sisithili saseSão Bartolomeu. Isithili yilali ejikelezwe ngumlambo iVelhas (osanda kuzalwa) enezakhiwo ze-baroque ukusuka kwinkulungwane ye-16 kunye nabahlali abanobuhlobo kakhulu. Lisiko kwindawo yokuvelisa iilekese ezenziwe ngezandla, kunye ne-guava cascão (ilifa elingabonakaliyo) njengemveliso ephambili. Uninzi lwendalo kunye neengxangxasi zikwindawo engqongileyo, apho unokuphonononga kwaye uhambe kwiikhenketho ezahlukeneyo. Ukufikelela kwipaki yehlathi ye-UAIMII ikufutshane nelali, apho kukho ubuhle obuninzi bendalo kunye neendawo zokuloba, i-kayaking, amachibi.
Umbuki zindwendwe ngu- Prema
Sou o Prema Tavinho, um dos coordenadores do Eco-centro/hospedagem da cachoeira, onde mora o Sandro, meu parceiro, e onde temos uma casa e um bangalô que alugamos pelo Airbnb. Esse espaço é um projeto que buscamos sustentabilidade, produzimos alimentos orgânicos e temos um sonho de mundo mais ecológico e em equilíbrio
Sou o Prema Tavinho, um dos coordenadores do Eco-centro/hospedagem da cachoeira, onde mora o Sandro, meu parceiro, e onde temos uma casa e um bangalô que alugamos pelo Airbnb. Esse…
Siyayihlonipha iminqweno yeendwendwe. Ukuba ufuna ukuhlala unobumfihlo obungakumbi, siza kusebenzisana kuphela xa kuyimfuneko. Ukuba ufuna ukuthetha, siyakuthanda ukwabelana ngamava, singakubonisa izityalo, sithethe ngokutya okuphilayo kunye nokuphila okusempilweni.
malunga nonxibelelwano lwangaphambi kokufika, siyafumaneka ngefowuni, ngoWhatsApp, nge-imeyile, okanye nantoni na iindwendwe ezicinga ukuba yeyona ifanelekileyo.
Siyayihlonipha iminqweno yeendwendwe. Ukuba ufuna ukuhlala unobumfihlo obungakumbi, siza kusebenzisana kuphela xa kuyimfuneko. Ukuba ufuna ukuthetha, siyakuthanda ukwabelana ngamav…